जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी वृद्धि योजना | गृहपृष्ठ
Home लगानी जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी वृद्धि योजना
जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी वृद्धि योजना
पहिलो त्रैमासमा १० कम्पनीको चुक्तापूँजी ९३% वृद्धि
२ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्‍याउने कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरू तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्‍याउन योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेका छन् । बीमा समितिले रू. २ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएसँगै बीमा कम्पनीहरूले पूँजीवृद्धि योजना बनाएका हुन् । पहिलो त्रैमाससम्ममा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले मात्र तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्‍याएको छ । कम्पनीले रू. ३ अर्ब ९ करोड ६४ लाख २८ हजार चुक्तापूँजी पुर्‍याएको हो । अन्य कम्पनीले हकप्रद शेयर तथा बोनस शेयरमार्फत पूँजीवृद्धि योजना बनाएका छन् । योजनाअनुरूप पूँजीवृद्धिका लागि एशियन लाइफ इन्स्योेरेन्सले २ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीले रू. १ सय अङ्कित दरको ४० लाख २७ हजार ९ सय ६६ दशमलव २० कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नेछ । विक्री प्रबन्धक एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ । सो हकप्रद शेयर निष्कासनपछि चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब २० करोड ८३ लाख ८९ हजार पुग्नेछ । हकप्रद शेयरपछि अपुग रकम कम्पनीले बोनस शेयरमार्फत पुर्‍याउने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि पूँजीवृद्धिका लागि २ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । निवेदन दिएसँगै कम्पनीले रू. सय अङ्कित दरको २९ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नेछ । विक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ । सो हकप्रद शेयर निष्कासनपश्चात् कम्पनीको पूँजी रू. ८९ करोड १० लाख पुग्नेछ । त्यसपछिको अपुग रकम कम्पनीले हकप्रद र बोनस शेयरमार्फत पुर्‍याउने योजना रहेको छ ।
चुक्तापूँजी बढाउन प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स १ बराबर १ दशमलव ६० अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि कम्पनीले नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कात्तिक २७ गते निवेदन दिएको छ । कम्पनीले रू. सय अङ्कित दरको ६१ लाख २ हजार कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नेछ । विक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । सो हकप्रद शेयर निष्कासन तथा बाँडफाँटपश्चात् चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब २२ करोड ४ लाख पुग्नेछ । त्यसैगरी, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले १० बराबर ६ अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनमा कात्तिक २७ गते निवेदन दिएको छ । निवेदन दिएसँगै कम्पनीले रू. १ सय अङ्कित दरको ९९ लाख ३६ हजार ४ सय ७७ दशमलव ५४ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न निवेदन दिएको हो । विक्री प्रबन्धक एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ । सो हकप्रद शेयर निष्कासन बाँडफाँटपश्चात् पूँजी रू. २ अर्ब ६४ करोड ९७ लाख २६ हजार पुग्नेछ । नयाँ कम्पनी युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पूँजीवृद्धिका लागि ६४ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव कात्तिक १३ गते सम्पन्न साधारणसभाले पारित गरेको छ । हाल कम्पनीको पूँजी रू. १ अर्ब ५० करोड ५० लाख रहेको छ ।
१० जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी ९३ दशमलव ४४ प्रतिशत बढेको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले यस्तो देखिएको हो । नयाँ तीन कम्पनीले वित्तीय विवरण प्रस्तुत गरिसकेका छन् । कुल १० जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १३ अर्ब ९ करोड ८९ लाख ५३ हजार रहेको छ ।